[RASMI] xidhmo dr.fone - iPhone Data Recovery 
dr.fone xidhmo - iPhone Data Recovery
1-dii iPhone software kabashada xogta dunida ee.
heerka soo kabashada xogta iPhone ugu sarreeya ee warshadaha.
Kabsadaan xogta ka iPhone, iTunes iyo iCloud.
Kabsado sawiro, videos, xiriirada, fariimaha, qoraalada, abuse call, iyo in ka badan.
Jaanqaadaan iPhone ugu dambeeyay 7 Plus, iPhone 7.
xogta laga badiyay aan laga badiyay. Waxaan soo kaban karo files ka xaalado badan oo caan ah.
xogta laga badiyay ka dib markii keddibna warshad
xogta laga badiyay ay sabab u tahay update macruufka
Device xayiran iyo jawaab
Xogta la la'yahay kadib markii JAILBREAK ama ROM Laydh iftiimaya
Device qufulan ama illoobay password
Awoodin in ay waafajinta gurmad
Hubi & xiisaha leh tirtiray Data for Free
Waxaad isticmaali kartaa this kabashada xogta macruufka in laga baarayo dhammaan xogta la tirtiro ama lumay on your iPhone, iPad ama iPod taabashada, oo ku eegaan faahfaahsan for free.
Download iyo View iCloud Content ee kaabta for Free
Ma doonaysaa in la soo dejisan iyo soo saaro faylka gurmad iCloud? Tani macruufka ah software kabashada xogta kuu ogolaanaysaa inaad u samayn for free. Isku day oo aad ku ogaan doonaa.
Read Your iTunes File kaabta for Free
Waxaynu wada ognahay in Apple ma ogola in dadka wax loo akhriyo content ee faylka gurmad iTunes, halka this macruufka ah software kabashada xogta sameeya, waana lacag la'aan.
1 Click to Kulanka Xiisaha & Print Your Data
Waa in ka badan ah oo macruufka ah qalab kabashada xogta. Marka aad hesho xogta aad ee natiijada scan, waxaad si toos ah ku eegaan kartaa oo aad daabacan content marka aad u baahan tahay sida a. Waa shaqo hal click ah.
Kabsado Illaa 18 Noocyada File
Tani macruufka ah software kabashada xogta awood aad ka bogsato xogta sida xiriirada, fariimaha, sawiro, qoraalo, wac taariikhda, xusuusinta, fariimo WhatsApp, iyo in ka badan, ilaa 18 nooc file.
Xulo soo kaban waxa aad rabto
Ka dib markii dhowr aad iPhone, iPad ama iPod taabashada, ama soo saarida iTunes ama iCloud files raad raac ah, aad ku eegaan karo iyo dooran waxyaabaha kasta oo aad rabto in aad u soo to your computer ama qalab aad. Waa gebi adiga.
No arrinta tahay inaad la isticmaalayo iPhone ugu dambeeyay 7, iPad Pro, ama iPhone hore 4, iPad 1, this kabashada xogta macruufka si buuxda u socon kara oo dhan lagu daydo ee iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Tani macruufka ah software kabashada xogta waa software ah si buuxda u akhri oo kaliya. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad ama file ah gurmad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
Buuxi macruufka Dhignaashada
All lagu daydo ee iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iyo iPad
nooc file taageerayaan
3 Methods Data Recovery
Si toos ah baarista phone inuu ka soo kabsado xogta la tirtiray
Soo saaro aad gurmad iTunes iyo kabsado files soo doortay
Soo saaro aad gurmad iCloud oo soo kabsado files soo doortay
Heerka ugu sareeya kabashada in industry ee.
Guarantee dr.fone ee
Dareen leh, ammaan ah, oo lagu kalsoonaan karo.
Isku day free muddo 30 maalmood ah!
Isku day Free Wixii 30 maalmood!
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Available
Hubinta macluumaadka si faahfaahsan ka hor dib u soo kabashada
Kabsado dhammaan xogta, ama dooro files
data jira aan la overwritten doonaa
Adiga kaliya ayaa ka heli kartaa xisaabtaada
3 tallaabo fudud: xirmaan, scan iyo soo kabsadaan
30 maalin maxkamad free
QOR DIB U EEGIDDA A
All photos tirtiray waa la helay. Qaatay 30 daqiiqo. rakibidda barnaamijka aanu waqti badan qaadan. Haddii aad og tahay Ingiriisi, ka dibna wax kasta oo u dhaco si deg-deg. Waxaan u isticmaali doonaa barnaamijka xaaladaha degdegga ah. Ku kalsoonow, waayo, soo kabashada guul muhiim ii photos.
Waad ku mahadsan tahay caawimaad. Waxaad iga caawiya inuu ka soo kabsado sawiro aan la tirtiray. Barnaamijkan waxa u fiican. Waxaan talo qof walba si ay u isticmaalaan barnaamijka haddii aad tirtirto macluumaadka loo baahan yahay
Barnaamijka Good. Wuxuu ka caawiyaa dadka inay ka soo kabsadaan files tirtiray. Thanks to abuuray. Waxaan ku talinaynaa isticmaalaya badan oo dad ah kuwaas oo dhab ahaantii u baahan tahay in la soo celiyo apps. Ha ka baqin si loo soo dajiyo barnaamijka. Maxaa yeelay, waxay kaa caawin doontaa in aad ka bogsato comments aad tirtiray
3 Siyaabaha inuu ka soo kabsado masaxay fariimaha qoraalka on iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado Data ka iPhone Broken qubay
Sidee inuu ka soo kabsado History Call on iPhone (iPhone 7 Plus / 7 ka mid)
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka iPhone (iPhone 7 Plus / 7 ka mid)
Sidee inuu ka soo kabsado iPhone Data Khasaaray ka dib celinta si Factory Settings
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Video on iPhone 7 (Plus) / 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
Sida loo soo ceshano fariimaha WhatsApp on iPhone 7 / 6s / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iPhone Xiriir aan kaabta
Sidee inuu ka soo kabsado iMessages ka iPhone (iPhone 7 Plus / 7 ka mid)
Kaabta iyo soo celin wax kasta oo ku saabsan / qalab ah, iyo dhoofinta waxa aad rabto in aad ka gurmad ah in aad computer.